Nagu Saabsan - XIAMEN GACHN FARSAMADA CO., LTD.
Ku soo dhowow GACHN
Tiknolojiyadda Gachn (Koodhka Suuqa: 832368)wuxuu diiradda saaraa waxsoosaarka qalabka caqliga leh ee wax soo saarka wuxuuna ku dadaalaa inuu ka dhigo xirmooyinka xirmooyinka dawaarlaha ah ay run u tahay macaamiisheena. Cachn wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray soo saarista mashiinka baakadaha waraaqaha guryaha iyo qalabka ayagoo si buuxda u siinaya tikniyoolajiyadeeda hogaamineed iyo geesaha adeegga.
Tiknoolajiyadda Gachn si adag ugu jawaabaya "Maskaxda Shiinaha 2025" istiraatiijiyad qaran, oo ujeeddadiisu tahay casriyeynta qalabka wax soo saarka ee caqliga leh adduunka waxayna gelineysaa rabitaan iyo dadaal labadaba u roga "warshada aan duuliyaha lahayn" oo dhab u noqota macaamiisheena.
Waqtigan xaadirka ah, ee ku yaal astaanta GACHN ®, waxaan ku leennahay mashiinka tirin-tirka oo si buuxda otomaatig ah iyo mashiinka baakadaha xirmooyinka xirmooyinka ee alaabta sida bacaha naafada, xafaayadda dhallaanka iyo tirtirka qallalan / qoyan iyo wixii la mid ah iyo wixii la mid ah. Intaas marka laga soo tago, waxaan qorsheyneynaa inaan ku darno baakadaha cuntada iyo baakadaha la isku qurxiyo oo ku yaal bartayada badeecada.
Tiknoolajiyadda Gachn waxaa la aasaasey 2011. Gachn, waxaan ku dhegannahay falsafadda ganacsiga 'ku saleysan macaamiisha' markasta. Sanad kasta in kabadan 10% dakhliga sanadlaha wuxuu tagaa maalgashiga R&D. Gachn, waxaan gelinnay nafteena iyo maskaxdeena oo dhan si aan ugu soo saarno qiimaha macaamiisha. Markaan sidaa ku helno, waxsoosaarka iyo adeegyada sumadda GACHN® ayaa si weyn loogu aqoonsan yahay suuqa. Yeelkeede, shirkaddu waxay sidoo kale la kulantay daqiiqad kobcitaan cajiib leh iyada oo koboc dakhli sannadeedka in ka badan 50%. Iminka, shirkadda waxay leedahay wax soo saar sanadle ah oo ka badan 200 oo meelood. Muddo sannado ah, Gachn wuxuu iskiis u horumariyay mashiinka baakadaha iyo alaab-qeybiyaha ee la doorbido shirkadaha xareynta waraaqaha guryaha.
Siyaasadda Ganacsiga: Diirad saarida macaamiisha
Howlgalka: Si caqli gal ah u sameynta waxsoosaarka alaabooyinka saxda ah una abuuri karto valus macaamiisha.
Himiladeenna: In aan noqonno magaca koowaad ee adduunka oo dhan.
Qiyamka: Caddaaladda, Rush, Fiican, Guul-guuleysiga
Dhex-dhexaadnimo ： tartan caddaalad ah, runta ka raadso xaqiiqada
Rush: Inaad tusaale u noqotid, gacaliye inaad qaadatid mas'uuliyadda, sharciyada u dejiso
Kaamil: horumarin joogto ah, kaamil sii kaamil, ha joojin joojin
Guul-win: win-win leh macaamiisha, win-win leh shaqaalaha, win-win la iibiyayaasha.
Wax soo saarka garaaca ee Gachn Technology iyo xirmooyinka xirmooyinka:
1,mashiinka tirinta otomaatiga ee tirinta iyo xirmooyinka xirmooyinka xafaayadaha iyo saqafka alaabada
2 machine Mashiinka wax lagu tiriyo oo otomaatig ah iyo xirmooyinka xirmooyinka xareynta ilmaha
3 speed Xawaaraha qoyan ee xawaaraha sare leh ee qadka soosaarka hal iyo xabbado badan, mashiinka tirinta
4 machine Mashiinka xaashiyaha jilicsan ee wejiga-jilicsan ee jilicsan ee loogu talagalay 'Single' iyo 'dual,' mashiinka baakadaha unugyada jeebka
5 speed Xawaare sarreeya, qadarka-xirmidda qadka soo-saarka musqusha lagu tuuro
6 speed Soosaarka xawaaraha sare iyo khadka baakada loogu talagalay maaskaro wajiga, xawaare sare oo maaskaro wejiga lagu buuxiyo iyo mashiinka xiridda
Si aan ula soconno tallaabada suuqa, marwalba waxaan wanaajineynaa nafteena oo waxay naga dhigeysaa mid hagaagsan.
Waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa saaxiibbadeena adduunka oo dhan inay nagala soo xiriiraan iskaashiga ganacsiga muddada-dheer. Daacadnimo kalgacal leh uguna talo galey sameynta iskaashi guul wada shaqeyn ah mustaqbalka dhow!